आज सोमबार रविको रिहाइ हुने दिन ! विप्लपले गर्यो चितवन बन्दको घोषणा, अब के होला ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आज सोमबार रविको रिहाइ हुने दिन ! विप्लपले गर्यो चितवन बन्दको घोषणा, अब के होला ?
आज सोमबार रविको रिहाइ हुने दिन ! विप्लपले गर्यो चितवन बन्दको घोषणा, अब के होला ?
काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेर्तत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बिज्ञप्ती जारी गर्दै भदौ ९ गते सोमबार चितवन बन्दको आह्वान गरेको छ । नेकपा चितवन सेक्रेटरी धुर्व र ईन्चार्ज शार्दुलद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भदौ ६ र ७ गते प्रचार प्रसार, ८ गते मसाल जुलुस र ९ गते चितवन बन्द कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ । राप्ति ११ को आहोलेवाङ्गं भन्ने गाउमा नेपाल कम्युनिट पाटिले बनाएको प्रतिक्षालय प्रहरीले भत्काएको कारणले त्यसको विरोधमा नेकपाले सोमवार चितवन वन्दको आवहान गरेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
त्यस्तै चितवनको खैरहनी नगरपालिका २ सिमलघारीमा ब*म बि*स्फोट भएको छ । कयर खोला किनारमा आज साँझ ब*म बि*स्फोट भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बि*स्फोटबाट मानविय र भौतिक क्षति नभएको प्रहरीको भनाई छ । विप्लब नेतृत्वको नेकपाले भोली आब्हान गरेको चितवन बन्दको पूर्वसन्ध्यामा विस्फोट गराएको हुनसक्ने प्रहरी अनुमान छ ।
त्यस्तै सोमबार पुडासैनी प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेवि*रुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा यता विप्लपको बन्दले झन् चितवन आ*तंकित बन्ने हो कि भन्ने आशाका गरिएको छ । पुडासैनी प्रकरणमा दुरु*त्साहन’ मुद्दा लागेका रवि लामिछानेको बयान भोलि सोमबार हुने भएको छ। आज अभियुक्त अस्मिता कार्की (रुकु)को बयान सकिएको जिल्ला अदालत चितवनका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिए।रवि र अर्का अभियुक्त युवराज कँडेलको भोलि मात्रै बयान हुने गिरीले बताए। बयान नसकिएकालाई आज हिरासतमै राख्न अदालतले आदेश दिएको छ।
आफ्ना पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको दुरू*त्साहन गरेको भन्दै लामिछानेसहित तीन जनालाई साउन ३० गते प्रहरीले प*क्राउ गरेको थियो।प्रहरीले रवि लामिछाने, अस्मिता कार्की र युवराज कँडेललाई प*क्राउ गरेको हो।
कोसीको पश्चिमी तटबन्ध भत्किने जोखिम, जिल्लावासी त्रा’ समा
हलिउड अभिनेत्री हेविल्याण्डको १०४ वर्षको उमेरमा निधन